Chii chinonzi e-commerce logistics? | ECommerce nhau
Kune chero kambani, bhizinesi kana bhizinesi ine iyo Chinangwa chekuwana mari, uchipa uchidzosera chimwe chigadzirwa kana sevhisi, iwe unofanirwa kuve nenzvimbo yakatarwa yekushandisa, nekuti ichi ndicho inotarisira kuiswa kwechigadzirwa yakakodzera munzvimbo chaiyo, uye makambani makuru ayo akatsaurirwa kune e-commerce haana zvaasarudzika, nekuti iwo akavakirwa pane akasiyana nzira dzekushandisa iyo inoita akati wandei emabasa emakambani aya. Tevere isu tichataura zvishoma nezve izvi nzira dzakakomberedza e-commerce.
1 Masisitimu eruzivo
2 Stock nekuchengetedza
3 Iko kutumira
Muchikamu chino zvakakosha kuti iyo yose chigadzirwa ruzivo, Zvakare nehunhu hwayo, kuvimbika kwevatengesi, zvikamu zvezvimwe zviripo, chikamu ichi chiri zvakare kutarisira kubata nguva ichatora chigadzirwa kuzosvika kwachiri kuenda, kana mune ino mutengi. Izvo zvakakosha kuti pasine zvikanganiso muchikamu chino, sezvo zvichigona kuve zvakakomba.
Ichi chikamu chiri kutarisira kugadzirira kwezvigadzirwa zvinotumirwa, kurongedza kwacho kunofanirwa kuve kwehunyanzvi, sezvo zvichidikanwa kuti chigadzirwa chinosvika chakaringana kumutengi, izvi zvinobatsira kuvaka kuvimba pakati pemutengi-mutengesi, uye zvinoratidza mutengi kuchengetedzeka kwekutenga zvigadzirwa kubva panzvimbo imwechete. Iko kunyorerwa kwezvigadzirwa uye kurongedza zvakafanana nenzira dzakakosha zvinhu, nekuti chigadzirwa chinofanira kusvika pakero chaiyo.
Kugovaniswa kwezvinhu ndicho chikamu chekupedzisira, asi pasina kupokana iri zvakare rakanyanya kukosha, zvichipiwa kuti zvakakosha kuve nenzvimbo dzekuparadzira umo zviri nyore uye nekukurumidza kuendesa zvigadzirwa kune vatengi zvisinei nenzvimbo yekugara kwavo. E-commerce makambani anogara aine dzakasiyana sarudzo dzekutakura, izvo zvinonyanya kukosha kuve nevashandi vakazvipira kuzvinzvimbo zvavo, kuitira kuti zvese zvifambe nenzira kwayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Chii chinonzi e-commerce logistics?